अहिले सम्विधान निर्माणको क्रममा महेंद्र र वीपी मध्ये एकलाई रोज्ने बेला हो। मैले देखे बुझेको काँग्रेसी र एमाले वाला हरु सबै महेन्द्रपथमा कुदिरहेका छन। किन होला? यहाँ भुमिगत गिरोह त सक्रिय भएको होइन? सेनाले चुनावमा धाँधली गर्दिने अनि बदलामा एमाले काँग्रेसले सेनालाई संसदभन्दा माथि मान्दिने वर्तमानको भुमिगत गिरोह हो। देशमा संघीयता मात्र होइन लोकतन्त्र नै खतरामा छ।
bp koirala federalism Hindi king mahendra Nepal Nepali Nepali Congress